Vol. 14 DECEMBER, 1911. Nha. 3
KUVANA kunowanzotaurwirwa nyaya yevakaroora vakaroora avo vakapedza yakawanda yenguva yavo mukuda. Pavaive vakagara pachituro chavo chemanheru mamwe manheru, uye, semazuva ese, vachishuvira chinhu ichi kana icho, fani yakaoneka ndokuti, kuti kuziva kwaishuva kwavo kuita kuti zvishuwo zvavo zvigadzikane iye anga auya kuzovapa zvido zvitatu chete. Vakave nekufara uye kupererwa nenguva yekuyedza Fair yekupa, murume mukuru, achipa izwi kune chishuwo chemoyo wake kana dumbu, akashuva dai angave nemayadhi matatu ebhurawu. uye, chokwadi, muchipfuva chake maive nemayadhi matatu ehururu nhema. Mukadzi wekare, akatsamwa mukutambisa wakakosha zvakadaro mukana wekuwana chimwe chinhu nekuda kwekungoishuvira kwacho, uye kumuratidza kusatenderwa kwekusarangarira kwemurume wekare, akashuvira kuti nhema dzoga dziomerere pamhuno yake, uye ipapo dzakaramba. Nekutya kuti inogona kupfuurira ipapo, iyo harahwa - yakashuva kuti dai yadonha. Uye zvakaita. Fafiti yakanyangarika uye haina kuzodzoka.
Vana pavanonzwa nyaya iyi vanotsamwiswa kune avo vachembera, uye vakatsamwa pakarasikirwa mukana wakakura kudaro, sezvaive zvakaita mukadzi mukuru nemurume wake. Pamwe vana vese vakanzwa nyaya vakafungidzira pane izvo vangadai vakaita dai vaive nezvishuvo zvitatu izvi.
Ngano dzakabatana dzinoenderana nezvishuwo, uye kazhinji upenzi kuda, chimwe chikamu chefungidziro dzinenge dzese dzinza. Vana nevakuru vavo vanogona kuzviona ivo uye zvido zvavo zvinoratidzwa muHans Christian Andersen's "The Goloshes of Fortune."
Iyi fafitera yakanga ine ma goroshes izvo zvaizoitisa kuti ivo vaipfeka vafanotakurwa kuenda kune chero nguva nenzvimbo uye pasi pemamiriro ese ezvinhu uye aaishuvira. Nekuda kupa tsitsi parudzi rwevanhu, fafitera yakaisa goroshes pakati pevamwe mune ante-chipinda cheimba pakanga pakaungana bato rakakura uye vachipokana nemubvunzo wekuti nguva dzezera dzepakati dzaive dzisiri nani pane yavo zvake.
Pakubuda mumba, kanzura akange afarira zera repakati akapfeka maGoroshes eFortune pachinzvimbo chake uye, achifunga nezvekupokana kwake paakabuda pamusuwo, akazvishuvira panguva yaMambo Hans. Kudzokera akaenda mazana matatu emakore uye sezvaakadzika akapinda mumadhaka, nekuti mumazuva iwayo migwagwa yakanga isina kuvezwa uye nzira dzemigwagwa dzaisazivikanwa. Izvi zvinotyisa, akadaro kanzura, paakanyura mumatope, uyezve, marambi ese ari kunze. Akayedza kuti awane mukana wekuenda naye kumba kwake, asi hapana aifanira kuve nayo. Dzimba dzakange dzakadzikira uye dzakasvava. Hapana bhiriji zvino rakayambuka rwizi. Vanhu vakaita zvakatsiga uye vakapfeka zvinoshamisa. Achifunga zvake achirwara akapinda mukamuri yevaeni. Dzimwe nyanzvi dzakabva dzaita kuti ataure. Akashamisika uye akatambudzika pakuratidzwa kwavo kwekusaziva, uye nezvese zvimwe zvinhu zvaakange aona. Iyi ndiyo nguva isingafadzi kwazvo yehupenyu hwangu, akadaro achirovera kuseri kwetafura uye achiedza kupukunyuka nepamusuwo, asi kambani yakamubata tsoka. Mukutambudzika kwake, goroshes rakabva rabuda, uye akawana ari mumugwagwa waanoziva, uye pavharanda pakanga paine varindi vairara zvine mutsindo. Achifara nekutiza kwake kubva panguva yaMambo Hans, kanzura akawana cab uye akakurumidza kuendeswa kumba kwake.
Mhoro, akadaro murindiri pakupepuka, panorara magaro maviri. Vanonyatsoita sei, akadaro, achivasvetukira. Ipapo akatarisa pahwindo remurindi aigara kumusoro, akaona mwenje nemusungwa achifamba achikwira nekudzika. Inyika yakadii iyi irizve, akadaro murindiri. Kune muchengeti achifamba achikwira mukamuri yake panguva ino, apo angangodaro ari mumubhedha wake unodziya akarara. Haana mukadzi, kana vana, uye anogona kubuda achinakidzwa manheru ega ega. Anofara murume! Ndinoshuva dai ndanga ndiri iye.
Murindi uya akabva angotakurwa achipinda mumuviri achifunga muvaki uyu ndokuzviwana atendamira nepahwindo uye akatarisa zvinosuruvarisa pabepa repink raakange anyora nhetembo. Iye aive murudo, asi aive murombo uye haana kuona kuti uyo waaive ataridzira rudo rwake aigona kuve wakundwa sei. Akatsamira musoro wake zvisina tariro achipesana nepahwindo racho ndokugomera. Mwedzi wakapenya pamusoro pemutumbi wemurindi pazasi. Ah, akati, murume uyu anofara kupfuura ini. Haazive kuti chii kuda, sezvandinoda. Ane imba nemukadzi uye nevana kuti vamude, uye ini handina. Ndingagone ini here asi kuva nemugove wake, uye nekupfuura nehupenyu nekuzvininipisa zvido uye netariro dzinozvininipisa, ndinofanira kuve ndichifara kupfuura zvandiri. Ndinoshuva kuti dai ndiri mutariri.
Kudzoka kumuviri wake kwakaenda nharirire. Ah, yaive kurota kwakashata kudaro, akadaro, uye kufunga kuti ini ndaive muchengeti uye ndisina mukadzi wangu nevana uye imba yangu. Ndiri kufara kuti ndiri murindi. Asi akange achiri nemagoroshes. Akatarisa mudenga akaona nyeredzi ichidonha. Ipapo akabva atarisa mumaziso achishamisika pamwedzi.
Inzvimbo inoshamisa iyo mwedzi inofanira kunge iri, iye mused. Ini ndinoshuva kuti ndione nzvimbo dzisingazivikanwe uye zvinhu zvinofanirwa kunge zviripo.
Munguva diki akatakurwa, asi akanzwa zvakanyanya kubva munzvimbo. Zvinhu hazvina kuita sezvazvaive pasi, uye zvisikwa zvainge zvisina kugadzikana, sezvose zvimwe, uye airwara akasununguka. Iye aive pamwedzi, asi muviri wake waive pavharanda raakange arisiya.
Inguvai iyo nharirire? akabvunza achipfuura. Asi pombi yakanga yadonha paruoko rwomurindi, uye haana kupindura. Vanhu vakaungana, asi havana kugona kumumutsa; saka vakaenda naye kuchipatara, uye vanachiremba vakamufunga kuti afa. Mukumugadzirira kuviga, chekutanga icho chakaitwa kwaive kubvisa bhuru rake, uye, ipapo murindi akamuka. Husiku hwaityisa hwave uhwu, akadaro. Ini ndinoshuva kusazosangana neakadaro mumwe. Uye kana akarega kushuva, pamwe haazombodaro.
Nharirire yakafamba, asi yakasiya gorosi. Zvino, zvakaitika kuti mumwe muchengeti wekuzvipira akange aine wachi yake muchipatara husiku ihwohwo, uye kunyangwe yaive kunaya aida kuenda kunze kwechinguva. Haana kushuvira kuita kuti muvaki wepagedhi azive nezvekuenda kwake, saka akafunga kuti angotsvedza nepamhepo yesimbi. Akapfekedza goroshes uye kuyedza kuti apfuure nepfumo. Musoro wake wainge wakakurisa. Zvakashata sei, akadaro. Ini ndinoshuva kuti musoro wangu ugone kupfuura nekubaya. Uye zvakaita saizvozvo, asi asi muviri wake waive kumashure. Ikoko akamira, kuyedza sezvaaigona, aisakwanisa kumuisa muviri wake kune rumwe rutivi kana musoro wake kumashure kuburikidza nejena. Iye aisaziva kuti ma goloshes aive aisa paari maGoroshes e Fortune. Aive ari munhamo inosiririsa, nekuti kwainaya zvakanyanya kupfuura nakare kese, uye akafunga kuti achamirira kupora mbichana mukutuka uye kusvotwa nevane rudo vanhu vaizoenda mangwanani. Mushure mekutambura pfungwa dzakadai, uye zvese kuyedza kuzvisunungura achiratidza kuti hazvina basa, zvakaitika kuti akashuva musoro wake zvakare wakasununguka; uye zvakaita saizvozvo. Mushure mezvimwe zvishuvo zvakawanda zvinomuita mukukanganisa kukuru, iye akazvipira kubvisa maGoloshes eRombo.
Magorofu aya akaendeswa kukamba yemapurisa, uko, achivabata zvisiri zvake, munyori wekutevedzera akaaisa ndokufamba. Mushure mekuzvishuvira iye mudetembi nemwenje, uye nekufunga mifungo uye manzwiro e mudetembi, uye nekunzwa kwekutamba mumunda uye mukutapwa, pakupedzisira akashuva ndokuwana ari patafura yake mumba mavo.
Asi akanakisa maGoloshes eFortune akaunza kumudzidzi wechidiki wezvebhaibheri, iye akabata pamukova wekirabhu wekutevedzera mangwanani mushure mekuziva kwake rwiyo nemwenje.
Huya upinde, akadaro secretary wekuteedzera. Mangwanani akanaka, akadaro mudzidzi. Mangwanani anokudzwa, uye ndinofarira kuenda mubindu, asi huswa hwakanyorova. Ndingawane ini kushandisa goloshes ako? Zvamazvirizvo, akadaro munyori wezvekutevedzera, uye mudzidzi akazvipfekedza.
Mubindu rake, maonero omudzidzi aive akavharirwa nemadziro akapetana ayo aikomberedza. Rakanga riri zuva rakanaka rematsutso uye pfungwa dzake dzakatendeuka kuti vafambe munyika dzaakange achishuvira kuona, uye akashevedzera, "Ah, ndinoshuva kuti dai ndichifamba muSwitzerland, neItari, uye--. —— Asi haana kuda kuenderera mberi, nekuti akabva azviona ari muboka revamwe vafambi, mumakomo eSwitzerland. Aive akadzvanywa uye airwara akasununguka uye achitya kurasikirwa kwepasipoti, mari uye zvimwe zvinhu, uye kwaitonhora. Izvi hazvibvumirane zvikuru, akadaro. Ndinoshuva dai dai tiri kune rumwe rutivi rwegomo, muItari, umo munodziya. Uye, zvechokwadi zvakakwana, vaive.
Maruva, miti, shiri, nyanza yakayerera ichipfuura nemuminda, makomo achikwira parutivi uye achisvika kure, uye iro goridhe rezuva rinozorora sekubwinya pane zvese, vakaita chirevo chinoratidzira. Asi raive guruva, rinodziya uye rakanyorova mumuchovha. Nhunzi netsiva zvakaruma vese vakapfuura uye kukonzera kuzvimba kukuru pazviso zvavo; uye mudumbu mavo maive musina chinhu uye miviri yakaneta. Varombo vaishungurudzika uye vakaremara vakavakomba munzira yavo ndokuvatevera kune varombo uye vega imba yekugara pavakakamira. Izvo zvakawira pamijenya yemudzidzi kuti varambe vakatarisa ivo vamwe vafambi vachirara, kana zvisina kudaro ivo vakabaiwa zvese zvavaive nazvo. Kunyangwe tupukanana nekunhuhwirira izvo zvakamutsamwisa, mudzidzi akatuka. Kufamba kwaigona kunge kwakanyatso, akadaro, dai asiri muviri weumwe. Kwese kwandinoenda kana chero chinhu chandingaite, kuchiri kuda mumoyo mangu. Inofanira kunge iri muviri unodzivirira kuwana kwangu izvi. Ko muviri wangu waive wazorora uye pfungwa dzangu dzaive dzakasununguka ndaifanira kusava nechokwadi kuwana chinangwa chinofadza. Ndinoshuvira magumo anofadza kupfuura ese.
Ipapo akazowana ari kumba. Maketeni acho akadhonzwa. Pakati pekamuri yake pakanga paine bhokisi. Mariri akarara hope dzorufu. Muviri wake waive wazorora uye mweya wake uchizara.
Mukamuri maive nemafomu maviri achifamba chinyararire pamusoro. Ivo vaive Fairy Mufaro vaive vaunza maGoroshes eHorene, uye imwe fani yainzi Care.
Munoona, mufaro rudzii wakaunzwa nemaguru ako kuvarume? akadaro Care.
Asi hazvo vamubetsera iye anonyepa pano, vakapindura Fairy yeU mufaro.
Kwete, akadaro Care, akaenda zvake. Haana kudaidzwa. Ndichamuitira tsitsi.
Akabvisa maguru patsoka dzake uye mudzidzi akamuka akamuka. Uye ngano yakanyangarika ndokutora maGoloshes eFortune naye.
Zvine rombo rakanaka kuti vanhu havana maGoroshes eWorune, kana zvikadaro vanogona kuzviunzira dambudziko rakakura nekupfeka kwavo uye nekuva nezvishuvo zvavo nekukasira kukurumidza kupfuura mutemo watinorarama nawo unobvumidza.
Kana vana, chikamu chikuru chehupenyu hwedu chakatumirwa mukuda. Muhupenyu hwakazotevera, apo kutonga kunofanirwa kuve kwakakura isu, sevachembera vaviri uye vanopfeka goroshes, tinopedza nguva yakawanda tichishuva, mukusagutsikana uye mukuora mwoyo, pazvinhu zvatakawana uye zvatinoshuvira, uye mukuzvidemba kusingabatsiri. nekusada chimwe chinhu.
Kuda kuri kunozivikanwa kuve kwekuita zvisina hunhu, uye vazhinji vanofungidzira kuti zvido hazviteedzwe nezvinhu zvinoshuviwa uye hazvina hushoma pahupenyu hwavo. Asi aya mafungiro ekufunga zvisizvo. Chido chinokanganisa hupenyu hwedu uye zvakakosha kuti isu tizive maitiro ekuda kuita uye zvinounza mamwe mhedzisiro muhupenyu hwedu. Vamwe vanhu vanokurudzirwa nezvido zvavo kupfuura vamwe. Musiyano wemhedzisiro yekuishuvira kwemunhu mumwe kubva pakushuvira kweumwe zvinoenderana nekusakwanisa kana simba risinganzwisisike remafungiro ake, pahuwandu uye hunhu hwechiva chake, uye pamusoro pezvaakavavarira kare pfungwa uye pfungwa nezviito izvo ita nhoroondo yake.
Kushuva kutamba kutamba pakati nepfungwa uye chishuvo chakakomberedza chimwe chinhu chechishuwo. Chido chishuwo chemoyo chinoratidzwa. Kuda kuita kwakasiyana pakusarudza uye kusarudza. Kusarudza uye kusarudza chinhu kunoda kuenzanisa mukufunga pakati pacho nechimwe chinhu, uye sarudzo inoguma nechinhu chakasarudzwa mukuda kune zvimwe zvinhu izvo zvakaenzaniswa. Mukuda, chishuwo chinomutsa pfungwa kune chimwe chinhu icho chainoshuvira, pasina kumira kuti chichienzanise nechimwe chinhu. Iko kunoratidzwa kuchiva kuri kwechinhu icho chinoshuviwa nechido. Chishuwo chinowana simba rayo kubva uye chakazvarwa nechishuwo, asi kufunga kunoupa chimiro.
Iye anoita kufunga kwake asati ataura, uye anotaura mushure mekufunga chete, haana kuita sekuda kufanana neanotaura asati afunga uye ane kutaura kwake ndiko kunobva kwekusavimbika kwake. Muchokwadi, munhu akura mune ruzivo uye akabatsirwa kubva pane zvakaitika kwaari kuita kushoma chaizvo. Maraiti muchikoro chehupenyu, wana zvakawanda zvinofadza mukuda. Hupenyu hwevazhinji maitiro ekuda, uye masimbuko muhupenyu hwavo, senge rombo, mhuri, shamwari, nzvimbo, chinzvimbo, mamiriro uye mamiriro ezvinhu, mafomu uye zviitiko mumatanho anoteedzana semhedzisiro yekuda kwavo.
Kushuva kune hanya nezvinhu zvese zvinoita sekunge zvinokwezva, sekutora bharanzi rinofungidzirwa, kana kutora dimple, kana kuve muridzi wematunhu makuru nehupfumi, kana kutamba chikamu chinoonekera pamberi peziso reveruzhinji. uye zvese izvi zvisina kana chirongwa chaicho chekuita. Zvido zvakajairika ndezve izvo zvine chekuita neako wega muviri uye kudya kwayo, senge chishuwo chechimwe chinhu chekudya, kana kuwana chimwe chinotapira, chishuvo chemhete, zvishongo, chidimbu cheyahwe, chipfeko, jasi. kunyatsogutsikana, kuva nemotokari, chikepe, imba; uye izvi zvido zvinowedzera kune vamwe, sekushuvira kudiwa, kuvengwa, kuve nekuremekedzwa, kuve nemukurumbira, uye kuve nekupfuura kwepasirese pamusoro pevamwe. Asi kazhinji apo munhu anowana icho chinhu chaanoshuvira, anoona kuti icho chinhu hachigutse zvakakwana iye uye anoshuva chimwe chinhu.
Avo vakave neruzivo nezvisikwa zvepanyika uye zvemuviri uye vanovawana kuti vave vanogadzikana uye vasina kuvimbika kunyangwe kana vawana, vanoshuva kuve nekushambidzika, kuzvidzora, kuve wakanaka uye vakangwara. Kana kushuvira kwemunhu kuchinjira kuzvidzidzo zvakadaro, anomira kushuvira uye anoedza kuwana izvi nekuita izvo zvaanofunga kuti zvichawedzera kunaka uye kuunza huchenjeri.
Imwe mhando yekuda ndeyekuti iyo isinei nehunhu hweumwe asi ine hukama nevamwe, sekushuvira kuti mumwe apore hutano, kana hupfumi hwake, kana abudirira mune rimwe bhizinesi, kana kuti anozozvidzora uye kugona kuraira chimiro chake nekuvandudza pfungwa dzake.
Mhando dzose idzi dzezvishuwo dzine mhedzisiro yadzo uye pesvedzero, iyo yakatemwa nehuwandu uye hunhu hwechido, nehunhu uye simba repfungwa dzake, uye simba rakapihwa izvi nepfungwa dzake dzekare uye zviito zvinoratidzira chishuwo chake chiripo ramangwana.
Pane nzira yakasununguka kana yevacheche yekushuvira, uye nzira yakanyanya kukura uye dzimwe nguva inonzi yesainzi. Nzira yakasununguka ndeyekuti munhu ashuvire chinhu icho chinopinda mupfungwa dzake uye chichibaya zvaano fenda, kana icho chinongedzwa kufunga kwake nokupokana kwake uye zvishuwo. Anoshuvira mota, yacht, mamirioni emadhora, guta hombe-imba, nzvimbo huru munyika, uye nenzira imwechete sepaya paanoshuvira bhokisi rema cigar, uye kuti shamwari yake Tom Jones imubhadhare shanya manheru iwayo. Iko hakuna chokwadi pamusoro penzira yake yakasununguka kana yemucheche yekushuvira. Mumwe anogara mukati mayo ari angangove anoshuvira chero chinhu chimwe sechinhu chero chipi zvacho. Anosvetuka kubva pane mumwe achienda kune mumwe pasina kusangana kwepfungwa kana nzira mukuitwa kwake.
Dzimwe nguva munhu akasarudzika akangwara anotarisa muguruva, uye kubva pasi ipapo anotanga kushuva nekuona chivakwa cheimba yake, uyezve anoshuvira imwe hupenyu hwakasiyana nekukasira iyo iyo monkey ichisungirirwa muswe wayo, ichikwenya Bhurawuza uye anotaridzika akachenjera, anobva asvetukira kune rimwe rinotevera mitezo uye anotanga kutaura. Rudzi urwu rwekuda kunoitwa mune imwe hafu inoziva nzira.
Mumwe anoedza kushandisa nzira kune yaanoshuvira, anoziva zvizere uye anoziva nezvezvaanoda uye nezvezvaanoshuvira Sezvineiwo neanoregedza akangwara, kuda kwake kunogona kutanga pane chimwe chinhu chaanofarira chaanoda. Asi naye ichakura kubva muhudzvarwa wayo ukava kuda chaiko. Ipapo anozotanga kuzvinzwira nzara, uye kushuva kwake kuchagara mukuchiva kwekuchiva uye kwekumanikidza uye achida kuramba achizadzisa chishuwo chake, zvichienderana neizvo zvakanzi kare nechero chimwe chikoro chevadzidzi vane hunyanzvi, "Mutemo Opuleness. " Iye akachenjera ane nzira anowanzoenderera zvichienderana negwinyiso nyowani, kureva, kutaura chishuwo chake uye kudana uye kuda kwemutemo wake wekusuwa kuzadzikiswa kwavo. Chikumbiro chake ndechekuti pane zvakasikwa zviwande pane zvese kune vese, uye kuti ndiyo yake kodzero yekudaidzira kubva kuhuwandu iyo chikamu chaanoshuvira uye icho iye zvino chaanozvibira.
Sezvo ataura kodzero yake uye achiti anoenderera nechishuwo chake. Izvi anozviita nekurara nenzara uye achishuva kugutsa chishuwo chake, uye nekudonha kwakasimba nechido chake uye nekufunga pane yakasimbisirwa kuwanikwa kwekuzhinji, kudzamara iye anoshomeka pane wake chishuvo angave akazadzwa. Kwete kazhinji akangwara, maererano nenzira nyowani-yekutsvaira, zvido zvake zvinogutsa, kunyange asingawanzo kuwana kana chinhu chaaishuvira, nenzira yaaishuvira. Naizvozvo, nzira yekuuya kwayo inowanzoshungurudza, uye anoshuva kuti dai asina kushuvira, pane kutambudzika nenjodzi inowanikwa nekuwanikwa kwechishuwo ichi.
Mufananidzo weupenzi hwekusimbirira kushuvira nevanozviti vanoziva asi vasingazivi mutemo, ndiwo unotevera:
Muhurukuro pamusoro pekusavimbika kwekuda kusaziva uye kupesana nenzira dziya dzekukumbira uye kushuvira izvo zvinokurudzirwa nezvitendero zvakawanda zvitsva, mumwe akange akateerera nechido akati: "Handibvumirane nemutauri." Ndinotenda ndine kodzero yekuishuvira chero chandinoda. Ndiri kuda zviuru zviviri zvemadhora, uye ndinotenda kana ndikaramba ndichichishuvira ndichachiwana. ” "Madam," akapindura wekutanga, "hapana anogona kukutadzisa kuchiva, asi usamhanyisa." Vazhinji vakave nechikonzero chekuzvidemba nezvekuda kwavo nekuda kwenzira yavakagashira iyo. ” "Ini handisi mafungiro ako," akadaro. “Ini ndinotenda mumutemo wekuzeza. Ndinoziva nezvevamwe vakakumbira mutemo uyu, uye kubva muhukuru hwedenga zvishuvo zvavo zvakazadziswa. Ini handina hanya kuti zvinouya sei, asi ini ndoda zviuru zviviri zvemadhora. Nekuchiva uye nekuchiva, ndinovimba ndichauwana. ” Mwedzi yakati gare gare akadzoka, uye, achiona chiso chake chaakachengeta, uya waakanga ataura akabvunza kuti: "Madam, mauya here nechishuwo chenyu?" "Ndizvozvo," akadaro. "Uye waguta here nekuda?" akabvunza. "Kwete," akapindura. "Asi ikozvino ndoziva kuti kuda kwangu kwanga kusiri kuchenjera." "Sei?" akabvunza. "Zvakanaka," akatsanangura. “Murume wangu aive neinishuwarenzi yeupenyu hwake kwemazana maviri emadhora. Inishuwarenzi yake yandakawana. ”
(Kugumiswa mumagazini yaJanuary yeIzwi.)